Magdhawga waxqabadka qayb ahaan
Magdhawga la siiyay shaqaalaha
Iyada oo la tixgelinayo xaaladda caafimaad, gelitaanka xoogga nidaamka dib-u-habaynta ee waxqabadka qayb ahaan sharciga caadiga ah (oo markii hore loo muddeeyay Noofambar 1, 2021) ayaa ugu dambayntii dib loo dhigay illaa Janawari 1, 2021. Sidaas darteed, illaa iyo Diseembar 31, 2020, Magdhowga waxqabadka qeyb ahaan ee loo shaqeeyaha uu siiyo shaqaalaha ayaa weli lagu dejiyay 70% ee gunnada tixraaca guud ee saacadlaha ah (Labour C., art. R. 5122-18)
Go'aan n ° 2020-1316 sidoo kale waxay bixisaa faahfaahin ku saabsan isku soo aruurinta gunnada magdhawga ee fasaxa la bixiyay iyo gunnada waxqabadka qayb ahaan. Laga bilaabo Nofeembar 1, marka fasax bixintu ku egtahay qaab gunno magdhow ah, kaalmadan waxaa la bixiyaa marka lagu daro gunnada waxqabadka qayb ahaan.
Laga bilaabo Janaayo 1, 2021, sicirku wuxuu u kacayaa 60% mushaharka saacaddii la tixraaco; mushaarka tixraaca oo lagu xadiday 4,5 jeer mushaharka ugu yar saacadii. Mabda 'ahaan, dib dambe looma kordhin doono wax-soo-celinta faa iidada u leh qeybaha la ilaaliyo.
Arrinta xisaabinta magdhow, Digreeto Lambar 2020-1316 ee Oktoobar 30, 2020 waxay qeexaysaa shuruudaha iyo shuruudaha xisaabinta magdhowga shaqaalaha qaata walxaha magdhawga isbeddelka ama lagu bixiyo si aan joogto ahayn.
Waxqabadka qayb ahaan: caddaynta iyo wax ka beddelka laga bilaabo Noofambar 1, 2020 iyo Janaayo 1, 2021 July 10th, 2021Tranquillus
horeTallaabooyin u diyaargarow ah aabbaha shaqada looga eryo dhalashada cunuggiisa ka dib
socdaKu noqo shaqada fasax dheer oo xanuun ah ka dib